Go-To Strategies & Challenges To Holiday Marketing in Post-Covid Oge | Martech Zone
Oge pụrụ iche nke afọ dị n'akụkụ akuku, oge anyị niile na-atụ anya ịhapụ ndị anyị hụrụ n'anya na nke kachasị mkpa ịbanye na ịzụ ahịa ezumike. Agbanyeghị n'adịghị ka ezumike ndị a na-emebu, afọ a na-anọpụ iche n'ihi ọgba aghara zuru oke nke COVID-19.
Ọ bụ ezie na ụwa ka na-agbasi mbọ ike ịnagide ejighị n'aka na inching azụ na nkịtị, ọtụtụ ọdịnala ezumike ga-ahụkwa mgbanwe ma nwee ike ịdị iche n'afọ a ka akụkụ dijitalụ nke ime ememme ndị a nabatara agwa ọhụrụ.
Nnukwu Ememe Gafee .wa
Isi Iyi: Ntuziaka Azụmaahịa ezumike MoEngage
Ihe ịma aka nke ezumike ezumike na 2020
Na 2018, ezumike oge ezumike maka ire ere na e-commerce karịrị nke ahụ puku ijeri akara maka oge mbụ mgbe. Ọ bụ ezie na afọ a, ire ahịa nwere ike ịdị nwayọ mana ịnwe usoro ziri ezi na ọwa nwere ike inyere ụdị aka ịkwanye ngwaahịa site na ntanetị dijitalụ.
Mgbe nọ na US na Europe - Black Friday, Cyber ​​Monday, na Christmas & New Year Sale bụ ndị ama ama; na South East Asia & India - Diwali, 11: 11 ['sbọchị Ndị Na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye] (November), Harbolnas (December), na Black Friday na-achịkwa ndị ahịa.
Site na ngbanwe n'usoro oriri, mmasị ndị ọrụ yana ike ịzụta zuru oke nke ndị na-azụ ahịa, ụdị kwesịrị ịgbanwe usoro azụmaahịa ezumike ha iji gboo mkpa ọhụrụ. Ndị a bụ ụfọdụ ihe ịma aka n'ihi ọrịa na-efe efe nke nwere ike igbochi ịdị mfe nke Ezumike Ezumike:
Ndị na-azụ ahịa bara uru karị: Ndị na-eri ihe kemgbe ọtụtụ puku afọ agbanweela ụzọ ha si emefu ego ma si na swipers gaa na nchekwa. Ndị na-eri ihe ga-abụ ndị bara uru na ndị anaghị adị ngwa mgbe ha na-azụ ahịa.
Tụkwasịnụ okwu nnyefe okwuSite na mkpọchi na mgbochi mgbochi n'ofe ụwa, lọjistik maka ụlọ ahịa na-ere ahịa enweela nsogbu. N’April, ahịa mkpọsa na United States dara site na 16.4% 3 n'ihi nsogbu nke inyefe. Nsogbu ndị dị ka ụkọ ọrụ, mmachi ụgbọ njem, na imechi ókèala atụnyela ọnọdụ nke nnweta ogologo oge.
Nnupụisi ịzụ ahịa na-ụlọ ahịa: Ndị mmadụ na-akpachara anya na nke ukwuu banyere ịga ụlọ ahịa. Zụ ahịa dijitalụ na ntanetị ewerela ijeụkwụ. Ọbụna ụdị na-amata ụdị omume a ma na-enyekwa nnukwu ego maka ịzụ ahịa n'ịntanetị na-eme ka ndị ahịa nwee nchekwa n'uche.
Adala Mbà ezumike ezumike
Oge ezumike na-agbasakarị mmetụta uche na njikọ mmadụ. Dị mkpa ịgbakwunye na zing ahụ ọzọ usoro nkwukọrịta ha iji mee ka ndị na-eri ngwaahịa rata na ngwaahịa ha. Dị ka a ọmụmụ nke Kingdomlọ Ọrụ Dọkịta na United Kingdom nke Mgbasa Ozi, Mgbasa ozi na ọdịnaya mmetụta uche rụrụ ugboro abụọ yana ndị nwere naanị ezi uche (31% vs. 16%). Dịka onye na-azụ ahịa, ị ga-achọ ịhụ na mkpọsa gị lekwasịrị anya na ọ joyụ, ọnụ, na mmemme. Ndị a bụ usoro ole na ole maka ụdị iji were:
Enwekwuwanye mkpa dị iche iche na-atụgharị: Kọntaktị nnyefe bụ isi; ndị ahịa na-atụ anya n'ụdị na-ewere usoro nchekwa kacha mma nke na-ewulite ntụkwasị obi. Ndị a na-atụgharị n'akụkụ akụkụ ga-abụ nnukwu oge ezumike a iji zere ọsọ ọsọ na-echekwa na ahịrị ndị echere.
Lekwasị anya n'ahịa ahịa ekwentị - Dabere na Adobe Recap Holiday 2019, 84% nke uto e-commerce nke a gụrụ n'oge ezumike na United States rụrụ site na smartphones. Ebumnuche a na-elekwasị anya na ebe a na-enye ọnọdụ nwere ike ime ka njikọta maka akara na n'ikpeazụ ahịa ahụ.
Nkwurịta okwu ọmịiko: Nke a bụ a dịghị brainer na a doro anya ga-eme. Dị kwesịrị ilekwasị anya na mmetụta uche ma zere ịzụ ahịa ihu na ihu na iji aghụghọ ezi ozi. Ha kwesiri ime ka ịdị n'otu dị n'etiti ndị na-azụ ahịa n'oge a siri ike.
Lekwasị anya na Digitization: Kwado ọwa dijitalụ bụ nhọrọ doro anya maka ndị na-ere ahịa. Ahịa ire ere n'ịntanetị dị elu na June ma e jiri ya tụnyere ọnụọgụ ọrịa na-efe efe na February.
Ruo ndị ọrụ ndị ọzọ jiri ọkwa Push na-ahaziri: Ná nkezi, onye ọrụ na-enweta ihe karịrị 65 inma Ọkwa na otu ụbọchị! Sdị nwere ọgụ ya na elu ha push ngosi egwuregwu. Ekwela ka gị lostma Ọkwa ga-efu na ngosi tree, kwụpụta na ndị ọgaranya & ahaziri ificationsma Ọkwa ndị siri ike uche.
Chọta usoro ịzụ ahịa mkpanaka nke ọma tupu ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmaliteዎችን ahịa. Nhazi na nhazi nke onwe g’enweta mmeri n’oge ezumike a. Mee ka obi uto ezumike ahu bido!
Budata MoEngage Holiday Marketing Guide
Tags: 11: 11KrismasCOVID-19eburudigitizationọdịdị ala ụwahabolnasndu ndu ezumikeoge ezumikeahịa efumobile ahịa azumitinye akapost-covidkpọbata ọkwaretailSouth East Asia ezumike